netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:ကိုယ်ခန္တာအတွက်
-No Power use.This is2x battery only use
-Safe shaving system. Comb attachment
-Opti-start cap, Safe shaving system, Slim ergonomic design
-Wet & Dry use
Yves Rocher Milk Sunscreen Lotion SPF 30 Code:76612
-The SPF 30 SOLAIRE PEAU PARFAITE Sunscreen Lotion is formulated with the utmost respect for your skin. Its ultra-light, easy to apply texture does not leave any white or oily residue on skin:
• paraben free, perfume free and colorant free
• non-comedogenic• tested under dermatological supervision
အသားအရေခြောက်သွေ့နေလို့ Body Lotion သုံးဖို့ အမျိုးအမည်စဉ်းစားရခက်နေတဲ့ ပျိုမဒီတွေအတွက် YOUNG AS ကနေ WHITENING ESSENTIAL BODY LOTION လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်......
ဖြူစင်ဝင်းပစေလိုမှုကိုရှေးရှုပြီး YOUNG AS မှထူးခြားသောနည်းပညာနဲ့ သင့်အသားရေကိုဖြူစင်ဝင်းပမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Body Lotion ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ။ JOJOBA OIL နှုင့်ပြုလုပ်ထားသော Lotion ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အသားအရေစိုပြေချောမွတ်မူကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်အပြင် အရေးကြောင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်ရှင်............ ။
ယခုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Whitening Essential Body Lotion ကို အနည်းငယ်လိမ်းပေးရုံဖြင့် သင့်အသားအရေ အတွင်းပိုင်းအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိပီး စိုစွတ်ချောမွေ့မှု ကိုပေးနိုင်သော ကြောင့် အသားအရေ အက်ကွဲကြောင်း လက္ခဏာ များကိုကင်းဝေးစေ၍ အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းခြင်းကိုလဲ လျော့နည်းစေပါတယ်ရှင့်................ ။
ဒီ Whitening Essential Body Lotion ၏သင်းပျံတဲ့မွှေးရနံက သင့်ကို တနေကုန်မွှေးကြိုင်လန်းဆန်းစေယုံသာမက သင့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကိုတောင် ဆွဲဆောင်စေမှာပါ
Cathy Doll Snail Bright Body Snail Cream 220ml
Cathy Doll Snail Bright Body Snail Cream ကိုတော့ Snail Mucus မှထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များစွာကြွယ်ဝစွာပါဝင်၍ အရေပြားအနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်အားဖြည့်ပေးနိုင်သော Cream ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရေပြားပေါ်ရှိအမဲစက်များနှင့် အပြစ်အနာအဆာများကိုလျော့ချပေး၍ အသားအရေအားတောက်ပြောင်ချောမွေ့စေပါတယ်။ Moisturizer ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သောကြောင့် တစ်နေ့တာလုံးလိုအပ်သော အစိုဓါတ်ကိုထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ Sensitive skin အပါအဝင်မည်သည့်အသားအရေမျိုးမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Ready2White Whitener Body Lotion 150ml ကိုတော့ Glutathione, Arbutin, Snail Secretion Filtrate တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော အသားဖြူ Lotion ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Glutathione ကိုတော့သဘာဝပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရေပြားအတွင်း Melanin ထုတ်လုပ်မှုအားထိန်းချုပ်ပေးပြီး အသားအရေအားတောက်ပစေပါတယ်။ Arbutin ၏အစွမ်းသတ္တိကလည်း Melanin များနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်စေရန်ကာကွယ်တားဆီးပေးသောကြောင့် အသားအရေအားကြည်လင်ဝင်းပစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရုမှထုတ်ယူထားသောအချွဲကလည်း ပျက်စီးနေသောအသားအရေအားပြန်လည်ပြု့ပြင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် အသားအရောင်မညီညာခြင်းများ အနီစက်များနှင့်အရေပြားပေါ်ရှိအပြစ်အနာအဆာများကို လျော့ချပေးပြီးအသားအရေအားချောမွေ့တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ Ready2White Whitener Body Lotion မှာတော့ တိရစ္ဆာန်များမှထုတ်လုပ်ထားသောအဆီများလုံးဝ(လုံးဝ)မပါဝင်သည့်အပြင် အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိလွယ်ကူစွာစိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် ပုံမှန်အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ပျိုမေတို့၏အသားအရေအား တင်းရင်းကျစ်လစ်စေပြီး အရေပြားတွန့်ခြင်းနှင့် အရေပြားပေါ်ရှိအပြစ်အနာအဆာများကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
Cathy Doll Invisible Sun Protection SPF33 PA 20g
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်လိုက်သော Invisible Sun Protection SPF33 PA+++ လေးကိုတော့ Cathy Doll မှစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ပေါ့ပါးသော texture ရှိသောကြောင့် အလွှာသုံးလွှာအောက်ထိနက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်အပြင် SPF33 ပါဝင်သောကြောင့်နေလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Invisible Sun Cream တွင်ပါဝင်သော SPF နှုန်းဟာဆိုရင်တော့ အာရှ၏ရာသီဥတုဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးသော နှုန်းထားဖြစ်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်တွင်ပါဝင်သော UVA နှင့် UVB အားအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Iron ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေအားနေလောင်ခြင်းမှအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေညစ်ညမ်းခြင်းများနှင့် ဝက်ခြံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ချွေးပေါက်များအတွင်းချေးပိတ်ဆို့မှုများကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားပေး၍ တောက်ပချောမွေ့သောအသားအရေကိုတစ်နေ့တာလုံးရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IR ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေခြောက်သွေ့ ပျက်စီးစေသော အနီရောင်အောက်ရောင်ခြည် များကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Sun Cream လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cathy Doll Snail Bright Body Bath 750ml
Snail Mucus မှထုတ်လုပ်ထားသော Body Bath လေးဟာဆိုရင်တော့ အသားအရေပေါ်ရှိအညစ်အကြေများကို အကောင်းဆုံးဖယ်ရှားပေးမည့် ရေချိုးဆပ်ပြာရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေချိုးစဉ်အချိန်အတွင်း လိုအပ်သောပမာဏအားယူ၍ လက်ဖြင့်အသာအယာပုတ်ပေးခြင်းဖြင့် လန်းဆန်းသန့်ရှင်းမှုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့သောဆပ်ပြာမြုပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူရေဖြင့်ဆေးကြောနိုင်သည့်အပြင် Snail Mucus ၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့် အသားအရေအားချောမွေ့ တင်းရင်း တောက်ပြောင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားပေါ်ရှိ အပြစ်အနာအဆာများနှင့်အစက်အပြောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးချောမွေ့သောအသားအရေကြောင့် ယုံကြည်မှုရှိရှိဖြင့်နေ့ရက်များကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Body Sleeping Mask Intense Lotion လေးကိုတော့ Baby Bright မှအသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရေချိုးပြီးသည့်နောက်လိမ်းထားရုံဖြင့် တစ်ညတာလုံးစိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းသော Lotion လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Collagen ဖြစ်ပေါ်မှုကိုအားပေးပြီး အရေးကြောင်းများကိုလျော့ချပေးနိုင်သောကြောင့် စိုပြေတင်းရင်းသောအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Vitamin C ပေါင်းစပ်ပါဝင်ခြင်းကြောင့် အသားအရောင်အားညီညာစေပြီး ကလေးအသားအရေကဲ့သို့ နုပျိုလှပသောအသားအရေကို တစ်ဖန်ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Baby bright မှထုတ်လုပ်လိုက်သောCollagen Baby Me Body Shower Cream ဟာဆိုရင်တော့ အသားအရေအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရကြွယ်ဝစွာပါဝင်သည့်အပြင် Q10 နှင့် Collagen ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေအားတင်းရင်းတောက်ပစေခြင်း၊ glutathione နှင့် Vit C ပေါင်းစပ်ပါဝင်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိအမဲစက်များကိုလျော့ချပေး၍ တောက်ပစိုပြေသောအသားအရေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Intense texture formula အားအသုံးပြုထားသောကြောင့် သင်းပျံသောမွှေးရနံ့နှင့်အတူ အသားအရေအတွက်လိုအပ်သောရေဓါတ်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီး Vaitamin E ၏ပါဝင်သောကြောင့် Beauty Spa သွားသကဲ့သို့ အသားအရေအားတင်းရင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cathy Doll White Tofu Body Pudding 220ml
အကောင်းဆုံးသော အာဟာရဓါတ်များနှင့်အတူ တစ်ခါသုံးကြည့်ယုံဖြင့် စွဲလန်းနှစ်သက်စေမဲ့ White Tofu Body Pudding လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက်လိုအပ်သောရေဓါတ်ကို အပြည့်အဝဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အသားအရေအားတင်းရင်းစေပါတယ်။Moisturizing Complex ကြောင့်အရေပြားကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းအားကိုတိုးမြင့်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ငယ်ရွယ်နုပျို၍စိုပြေလှပသောအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ White Tofu Budding တွင်ပါဝင်သော Protein နှင့် Phytoestrogen ကတော့ Collagen ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်အပြင် Royal Jelly ၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့် အသားအရေတွန့်ခြင်းနှင့် အရေကြောင်းဖြစ်ခြင်းများကိုကာကွယ်ပေး၍ စိုပြေတောက်ပသောအသားအရေအားတစ်နေ့တာလုံးပိုင်ဆိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မည့်သည့်အသားအရေမျိုးမဆိုအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေသော White Tofu Body Pudding လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cathy Doll မှထုတ်လုပ်လိုက်သော Stop Time Body Gold Serum လေးဟာဆိုရင်တော့ ရွှေပါဝင်သောကြောင့် မွေ့ပျံ့သောသင်းရနံ့နှင့်အတူ တောက်ပသောအသားအရေကိုရရှိစေဖို့ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက်လိုအပ်သောအစိုဓါတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်သောကြောင့် အသားအခြောက်ခြင်း၊ အသားပက်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေပြီး အရေးကြောင်းများကိုလျော့ချပေးကာ နူးညံ့ချောမွေ့သောအသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gold Serum လေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအသုံးပြုလို့ရသည့်အပြင် ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်နူးညံ့ချောမွေ့သောအသားအရေကို ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cathy Doll Invisible Sun Protection SPF33 PA 5g
Cathy Doll Chilli Bomb Firming Body Massage Treatment 180g
Cathy Doll Chilli Bomb Massage Treatment လေးမှာဆိုရင်တော့ အထူးပြုလုပ်ထားသော ဆီလီကွန် brush လေးပါဝင်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုနေရာလပ်မကျန်ပြန့်နှံ့စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ L- Carnitine ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သောကြောင့် အဆီများလောင်ကျွမ်းရာတွင် ပိုမိုလျင်မြန်စေရန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်အပြင် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတင်းရင်းကျစ်လစ်သော အသားအရေကိုရရှိစေရန်ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် cellulite များအားပျော်၍လျော့ကျစေသောကြောင့် ကျန်းမာသောအသားအရေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tok Tok Collagen Brightening Body Booster သည်fresh collagen များကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် လင်းလက်တောက်ပ၍ငယ်ရွယ်နုပျိုသောအသားအရေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက်လိုအပ်သောအဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည့် အာဟာရဓါတ်ဖြည့်ပေးခြင်း၊ တောက်ပခြင်းနှင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုသောအသားအရေအားပိုင်ဆိုင်စေသည့်ရန်အတွက် ကူညီပေးမှာပါ။ ဒီ Booster လေးမှာတော့ ပင်လယ်ရေနက်ပိုင်းမှရရှိသော ငါးနှင့်အရွက်များ၏ fresh collagen များကြွယ်ဝစွာပါဝင်သည့်အတွက် အသားအရေအားတင်းရင်းကျစ်လစ်ချောမွေ့စေပါတယ်။ Hyaluronic acid ကတော့ အသားအရေကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းအားကိုတိုးမြင့်ပေးနိုင်သည့်အပြင် အသားအရေအတွက်လိုအပ်သောအစိုဓါတ်အား အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ Multivitamin ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သောကြောင့် အရေပြားအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရဓါတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးပြီးကျန်းမာလှပသောအသားအရေအားပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့်အပြင် Snail Mucus ၏အစွမ်းကြောင့် အရေပြားပေါ်ရှိအနီစက်များနှင့်အမဲစက်များကိုလျော့ချပေး၍ အရေးကြောင်းများနှင့် အရွယ်မတိုင်မီအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။ Baby Bright Tok Tok Collagen Brightening Body Booster လေးကိုတော့လိုအပ်သောပမာဏအား လက်ဖဝါးတွင်းထည့်၍ညင်သာစွာပုတ်လိမ်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cathy Doll Cookie Cream Hand & Nail Cream 30g
Cathy Doll ထုတ်လုပ်လိုက်သော Cookie’n Cream Hand & Nail Cream လေးကိုတော့ Whitening Formula ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး နူးညံ့သောလက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဗင်နီလာရနံ့ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး cookies ကဲ့သို့ texture ရှိတာကြောင့် ကိုက်စားချင်စိတ်ပေါက်သွားမှာနော်။ Silione အားအခြေခံ၍ထုတ်လုပ်ထားပြီး Cream သားဖြစ်သောကြောင့် အသားအရေအတွင်းသို့လျင်မြန်စွာစိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ချောမွေ့သောအသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စေးကပ်မှုမရှိသည့်အပြင် အသားအရေကျုံ့ဆန့်စွမ်းအားကိုတိုးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Arbutin, chocolate chip တို့အဓိကပါဝင်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေမည့်အပြင် Vitamin ၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့် အရေးကြောင်းများကိုလျော့ချပေးခြင်း၊ ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးခြင်းတို့အပြင် ကျန်းမာသောလက်သည်းခွံလေးများကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cookie’n Cream Hand & Nail Cream လေးကတော့ မည်သည့်အသားအရေမျိုးမဆို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။
Cathy Choo 24K Gold Shower Gel 750ml Code:8858842001110
24K Gold Shower Gel 750ml လေးကတော့ Nano နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Shower Gel လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွှေးပျံ့လတ်ဆက်သော ရနံ့ရှိသည့်အပြင် ရွှေရည်ပါ ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် စိတ်ကြည်ရွှင်လန်းဆန်းစေပြီး ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးကာ ဆဲလ်သစ်များကို မွှေးဖွားပေးသောကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကင်းဝေးပြီး နုပျိုလန်းဆန်းသောအသွင်ကို ရရှိခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Min: 290(Ks) Max: 185,500(Ks)
All Bathroom Accessories Body Mist Breast Cream Essence Hand Cream Lady Shaver Lotion Perfume Scrub Serum Shower Gel Toner Trimmer Waist Shaperz ရေချိုးဆပ်ပြာ မျက်နှာအလှအပ ခန္ဒာကိုယ်အလှအပ
All D'nae Karmart Life Ma'suri Panasonic Philips Soulmate Naturals Tiara Young As YVES ROUCHER
All 60ml 300ml Lavender 3oz(685239804065) Silk 3oz(685239804072) Pink Grapefruit 3oz(685239804089) Lavender 8oz(685239804034) Silk 8oz(685239804041) Pink Grapefruit 8oz(685239804058) 250ml 128ml 200ml 120ml 750ml 15g 460ml 100g 450ml 480ml 1000ml 140g 500ml 236ml 700ml 800ml 138ml 50g 30g 150ml 180g 5g 260ml 220ml 20g Xs S M L XL 2XL 3XL
All Panasonic Philips Ma'suri Life Soulmate YVES ROCHER Karmart D'Nae Young As Tiara COW